सिल्टलले डेटा स्क्रैपिंग उपकरणको सम्भावनात्मक फाइदा प्रदान गर्दछ
अन्य जस्तै वेब स्क्रैपिंग सेवाहरु, GitHub निकाय को जानकारी विभिन्न वेबसाइटहरू छिटो र प्रभावकारी ढंगमा. यो उपकरणले मुख्यतया छविहरूबाट डेटा स्क्रैप गर्दछ र तपाईंको ब्राउजिङ्ग अनुभव अद्भुत बनाउँछ.
व्यवसायिक नेताहरूले लगातार जानकारीको ट्रयाक गर्न र यसलाई कुशलतापूर्वक स्क्रैप गर्न चाहन्छन्, बिना गुणवत्तामा सम्झौता नगरी. GitHub एकत्रित उपकरण हो जुन स्क्रैप गर्दछ र तपाइँको डेटालाई वांछित ढाँचाहरूमा बचत गर्दछ. यसको केही लाभहरू तल छलफल गरिन्छ.
1. GitHub ग्लोबल डाटा इकट्ठा गर्न मद्दत गर्दछ (1 9)
GitHub सँग, तपाइँ वेबबाट डेटा सङ्कलन गर्न र व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको हार्ड ड्राइभमा यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।. त्यहाँ धेरै जानकारी र भिडियोहरू उपयोगी जानकारी समावेश छन्. सामान्य वेब स्क्रैपिंग सेवाहरूसँग, PDF कागजातहरू, JPG र PNG फाइलहरूबाट डेटा निकाल्न सम्भव छैन. यद्यपि, GitHub तपाईंलाई PDF कागजात र अन्य प्रकारका फाईलहरूबाट जानकारी स्क्रैप गर्न सजिलो बनाउँछ. छोटोमा, गिटहोबले व्यापार गतिशीलतालाई अझ राम्रो बुझ्न मद्दत गर्नेछ र नयाँ अवसरको ढोका खोल्नेछ.
2. GitHub सँग सटीक डेटा प्राप्त गर्नुहोस्: (1 9)
हामीले प्रयोग गर्ने डेटा निष्कर्षण उपकरण सही र प्रामाणिक जानकारी प्राप्त गर्दैनौं।. ती सेवाहरूको विपरीत, GitHub डेटा सही रूपमा एकत्र गर्दछ र त्यसको गुणस्तरको विश्लेषण गर्नुहोस्. त्यसैले यदि तपाईं प्रतियोगीको साइटबाट जानकारी स्क्रैप गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गिटहाउसको प्रयास गर्नुपर्छ. यो उपकरणले उच्च गुणस्तर परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई नक्कल सामग्री प्रदान गर्दैन.
3. GitHub तपाईंको समय बचत गर्दछ: (1 9)
डेटाको गतिमा उपलब्ध छ सबै फरक पार्दछ. GitHub सँग, तपाईं 50,000 तस्बिरहरू र वर्ड कागजातहरू 50 मिनेटमा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. यसकारण, यस उपकरणले तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ र डाटालाई उच्च गतिमा प्रसोधन गर्दछ. GitHub स्टार्टअप र वेबमास्टर्सहरूको लागि उपयुक्त छ र तिनीहरूलाई इन्टरनेटमा अधिक सुरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ.
4. GitHub सँग प्रतिस्पर्धी रहनुहोस्: (1 9)
डेटाको शक्तिलाई परिमार्जन गर्न परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण छ. GitHub संग, तपाईं प्रतिस्पर्धी रहन सक्नुहुन्छ र हालको बजार प्रवृत्तहरूमा अन्तराष्ट्रियता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो उपकरणले ई-वाणिज्य साइटहरू, एफएमसीजी कम्पनीहरु र मार्केटप्लेसहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ, यो सजिलो बनाउनुको लागि तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड खडा भएको छ भनेर निर्धारण गर्न. यसको कट-किनारा विशेषताहरूले तपाईंको ब्रान्डलाई राम्रो तरिकामा प्रचार गर्न र विज्ञापनलाई विज्ञापन दिन मद्दत गर्दछ.
5. एकै ठाउँमा सबै डाटा: (1 9)
GitHub सँग, तपाइँले वांछित ढाँचामा डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. इन्टरनेटले प्रत्येक मिनेटको जानकारी को क्विन्टियन बाइट्स उत्पन्न गर्छ. यस उपकरणले सामाजिक सञ्जाल साइटहरू र समाचार आउटलेटहरूबाट तपाईँलाई (3 9) स्क्रैप डेटा मद्दत गर्नेछ. तपाईं आफ्नो साइट को रैंकिंग को सुधार्न को लागी टेक्नोलॉजी ब्लगहरु र खरीदारी वेबसाइटहरुलाई लक्षित गर्न सक्छन्. तपाईं असंगत वा कच्चा डाटासँग सम्झौता गर्नु हुँदैन किनकि GitHub पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा तपाईंको डेटा व्यवस्थित गर्दछ र धेरै समय बचत गर्दछ।. यो उपकरण उद्यमहरू, अनलाइन कारोबार, कर्पोरेट र ट्राभल एजेन्सीहरूको लागि उपयुक्त छ.
यस डेटा स्क्रैपिंग सेवा को सौन्दर्य हो कि यो पुरा तरिकाले अनुकूलन योग्य छ र तपाईंको आवश्यकताहरु लाई एक बेहतर तरीका मा फिट बैठता छ।. GitHub को साथ, तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु को खोजशब्दों को ट्रैक गर्न सक्छन्, आफ्नो वेब पेज सूचकांक र दुवै आंतरिक र बाह्य लिंक देखि जानकारी को सुचारू रूप देखि निकाल सकते हो. धेरै कम्पनीहरूको GitHub भरोसा राख्नुहोस् र यो उपकरण नियमित आधारमा प्रयोग गर्नुहोस् Source .